जनमत सङ्ग्रह भ्रम र यथार्थ - लाल बिहानी
जनमत सङ्ग्रह भ्रम र यथार्थ
लाल विहानी सम्पादकीय
नेपालको १० वर्षे जनयूद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन मधेश र विभिन्न वर्ग समुदायहरूले न्याय, अधिकार र मुक्तिको लागि गरेका संघर्षहरूलाई लत्याएर संसदवादी दलहरू कुर्सी दौडमा छन् । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले नेपाली जनता र उनका पेशा व्यवसाय धरापमा छन् । संसद जोड घटाउ, सत्ता भत्ता, र लुट भ्रष्ट्राचारमा लिप्त छ । थुप्रै आवश्यक नीति कानुनहरू निर्माण नगरी सरकार एम.सि.सि.मा रयाल चुहाउँछ । राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा छ, जयसिंह धामीहरू दिन दहाडै विदेशी सुरक्षाकर्मीबाट हत्या गरिन्छन् । सिमामा भूमिहरू अतिक्रमित र डुबानमा छन् । अरबौ खर्च गरेर निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेको संसद त्यही संसदबाट बनेको सरकारले दुई दुई पटक संसद विघटन गरे जसले ठूला ठूला लोकतन्त्र गणतन्त्र अझ हामी कम्युनिस्ट पनि भन्न छुटाउँदैनन् अनि कसरी भयो जनमतको कदर ? अनि संसदलाई उच्च व्यवस्थापकीय मान्नेहरूले संसद नै पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री बर्खास्त र नियुक्ति न्यायपालिका अर्थात् अदालतले गर्छ । अहिले अदालतको फैसलाले शक्तिमा रहेका केपि ओलीलाई अदालती अपदस्त पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यसको राजनीतिक सार भनेको संसदीय व्यवस्थाको संकट हो, दलाल पुँजीवादी सत्ताको संकट नै हो ।
सैद्धान्तिक दृष्टिले, सामाजिक, व्यवहारिक अवस्थाले पनि देशको राजनैतिक मामिलाहरूको फैसला गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने निकाय वा संस्था भनेका राजनैतिक पार्टीहरू र तिनले खडा गर्ने राजनैतिक संस्थाहरू नै हुन् । संसदवादी राजनैतिक पार्टीहरू संकटमा गइरहेका छन् । उनीहरूका संस्थाहरू निकम्मा भइरहेका छन् । कुनै पनि राजनैतिक निर्णय लिने राजनैतिक हैसियतमा छैनन् । संसदवादी दलहरू सम्पूर्ण रूपले न्यायपालिका वा अदालत संग सहारा लिनुपरेको छ । यो संसदवादी राजनैतिक संस्था, पार्टी, नेतृत्व र संस्थाहरूको असफलता हो । यस्तो खाले निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ ? त्यो सम्भव छैन । अदालतद्वारा राजनैतिक पार्टीहरूको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बनिरहेको छ । अदालतले राजनीतिक दलहरूमा ह्विप नै लागू गर्न नपाइने जस्ता जुन प्रकारका निर्णय भएका छन् । यस कारणले के स्पष्ट छ भने राजनैतिक दलहरूको औचित्य अदालतले समाप्त गरिदिएको छ । केही दलहरू दुःखी र केही दलहरू रमाए पनि यसको
कुनै अर्थ छैन । रमाउनेहरूका लागि पनि यो एकछिनको आत्मरति मात्रै हो । यसको परिणाम भनेको फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चियता र अराजकता नै हुन्छ । जनतालाई पनि यो कुरा स्वीकार्य छैन । संसदीय पार्टीहरूको संकट, असफलता, संसदवादी पार्टीहरू विकृतिहरू मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । उनीहरूको असफलताले जनताले क्षति उठाउनुपर्ने, भोग्नुपर्ने, देशले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ । यसमा पनि जनता सहमत छैनन् । जनताले शान्ति, स्थिरता र स्वाधीनता चाहेका छन् । त्यो चाहिँ यो राज्य प्रणाली र यो व्यवस्था बाट हुँदैन् र आमूल परिवर्तनबाट होओस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण यो निर्णयले कुनै त्यस्तो नयाँ विश्वासको वातावरण वा शान्ति, स्थिरता र स्वाधिनता दिन सक्तैन । देशमा जुन खालको संकट, अस्थिरता, अराजकता उत्पन्न भएको छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको छ । विभिन्न गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर कुटनैतिक नियोगदेखि जासुसी संस्थासम्म सबैको चलखेल बढेको छ । यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देशमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । जनताले त्यसको निर्णय लिनु पाउनुपर्छ । जनताकै मतद्वारा एकचोटि नेपालमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दलाल पुँजीवादी सत्ता कि वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता भन्ने विषयमा जनमत जाहेर गर्नु आवश्यक छ । त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ र जनमतसंग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । यो अधिकार जनताले पाए भने त्यसको फैसलाबाट मात्र देशको निकासको दिर्घ समाधान
आउँछ भन्ने प्रस्ताव जनताको पार्टीको हुनु पर्दछ ।
संसदवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आशङ्का, दबाब, मोलतोल मा चल्ने खालको प्रवृत्ति छ । अहिले नेपालको यसप्रकारको राजौतिक परिघटनाले अबको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान दिने बाटो के ? आम जनताको परिवर्तनकारी आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने बाटो भनेको दुई वटा बाटो हो । एउटा जनताको सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । अर्को भनेको जनताको मतद्वारा, शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने हो । अहिले विशिष्ट स्थितिमा जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा यो व्यवस्थाको विकल्प दिन चाहन्छन्, अहिले त्यो वातावरण छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई एउटा नयाँ व्यवस्था रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना हो । यो कुरा राज्य र सरोकारवाला सबैले बुझ्नुपर्छ । राज्य र सरोकारवालाहरूले बुझ्ने बित्तिकै यो सरकार, अस्थिर किसिमको विघटन हुने, गठन हुने, कहिले संसदबाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अदालतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्न खालका लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमत सङ्ग्रह, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने मात्र अहिलेको राजनीतिक अन्यौलता, विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य आन्तरिक राज्य व्यवस्था बलियो हुन्छ ।
बैज्ञानिक समाजवादका : बिशेषताहरु
अनेरास्ववियु केन्द्रिय सदस्य बुढाथोकीको नगरप्रमुख बस्नेतलाइ खुल्ला पत्र
यी हुन् स्व.मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका जवजका १४ सिद्धान्त…..